हाम्रो बजेट हाम्रो चासो ! सोमबार, असार १३, २०७९
बर्तमान समयमा महिला उद्यमीको अवस्था कस्तो छ ? मंगलबार, असार ७, २०७९
विद्युत ट्रिपिङले उद्योगमा कस्ता समस्या निम्त्याएको छ ? आइतबार, जेठ २९, २०७९
वीरगन्ज ५ लाई समृद्ध वडा बनाउन के गरियो के गर्न बाँकी छ ? यस्तो भन्छन् स्थानीय ! सोमबार, जेठ २३, २०७९
स्थानीय समस्या हल गर्न नयाँ जनप्रतीनिधीले के गरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ? आइतबार, जेठ २२, २०७९
यस्तो छ विगतका बजेटको तुलनामा अहिलेको बजेट ! आइतबार, जेठ २२, २०७९
विपद् व्यवस्थापनको तयारी के हुँदै छ ? यस्तो भन्छन् सरोकारवाला ! जिम्मेवारी पाएका र पाउने व्यक्ति तथा निकाय सबैले आफ्नो जिम्मेवारीको काम गरिरहेकै छौं । सर्वसाधारणमा सचेतना जगाउने काम पनि गरिरहेका छौं । सोमबार, पुस १९, २०७८
महिला हिंसा न्यूनिकरण गर्न के हुनु पर्छ ? यस्तो भन्छन् सरोकारवाला ! अभियन्ताहरुको कार्य सम्पादन लक्ष्यमा पुग्न नसकेको वा पुगेर पनि समाजमा हिंसा विरोधी गतिविधि घट्न नसकेको यो पनि अनुसन्धानको पक्ष होला । तर यो क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरू भने हिंसा बढेकोभन्दा पनि उजुरी गर्ने र न्याय खोज्ने क्रम चाँही बढेको दावी गर्न थालेका छन् । सोमबार, मंसिर २०, २०७८
बर्षाैदेखी बन्न नसकेको तिलावे पुलको बारेमा यस्तो भन्छन् स्थानीय ! अधकल्चो छोडेको पप्पु लुम्बिनी जेभीले जनस्तरको दवाव र स्थानीय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको पनि दवावका बीच आगामी चैत मसान्तसम्म सक्ने भन्दै पुनः काम सुरु गर्न बाध्य हुँदैछ । शुक्रबार, मंसिर १०, २०७८
होटल व्यवसायीको अवस्था दयनिय, सिमानाका खुलेपनी चलेनन् होटल व्यवसाय सोमबार, कात्तिक ८, २०७८
धर्मको नाममा हुने बली प्रथालाई कसरी लिनु हुन्छ ? यो समयमा दुर्गाभवानीले मनको ईच्छा पूरा गरिदिने अपेक्षा सहित विभिन्न देवी देवताका शक्तिपीठहरुमा बली दिने पनि गरिएको पाइन्छ । परिवर्तित समय अनुसार बली दिने प्रथा चाही शास्त्रमा बर्णित नभएको भनी कतिले विरोधका गर्न थालेका छन् । यो अंकमा बली प्रथा बारे स्थानीयसँग लिएको प्रतिकृया सोमबार, असोज २५, २०७८
यस्तो छ, चाडपर्व लक्षित व्यवस्थापन यस्तो छ, चाडपर्व लक्षित व्यवस्थापन सोमबार, असोज २५, २०७८
वर्तमान समयमा यातायात व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ? यस्तो भन्छन् यातायात व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरु ! बिहीबार, भदौ १७, २०७८
मिनाबजार कम्पलेक्समा व्यवसाय गर्न कति सहज ? यस्तो भन्छन् व्यवसायी ! बिहीबार, भदौ ३, २०७८
कोरोनाको तेस्रो लहर बढिरहेको समयमा विद्यालय संचालन गर्नु कति उचित छ ? यस्तो भन्छन् सरोकारवाला ! दोस्रो लहरको संक्रमणदर केही कम भएका जिल्लाहरुमा अन्य क्षेत्र जस्तै विद्यालयहरु पनि खोल्ने तयारी हुँदैछ । तर अबको कोरोनाको संक्रमण बालबालिका लक्षित हुने भन्ने कुराले धेरैले विद्यालय खोल्नु हुन्न भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् । आइतबार, साउन ३१, २०७८
वीरगंज महानरको आदर्शनगरस्थित रहेको पुरानो बसपार्कमा के बनाउँदा उचित हुन्छ ? यसतो भन्छन् जनता ! शुक्रबार, साउन २९, २०७८
सीमानाकामा लागु औषधको कारोबार बढ्नु र युवा जमातकै बढि संलग्नता देखिनुलाई यस्तो छ कारण ! युवा भन्ने साथ भविष्यका कर्णधार जनशक्ति भन्ने बुझ्न खासै गाह्रो छैन । तर पछिल्लो समयमा सीमानाकाबाट हुने प्रतिवन्धित लागु औषध कारोवारका घटनामा युवाहरु बढि सम्लग्न भएको तथ्याँकले देखाएको छ । आइतबार, साउन १७, २०७८
वर्तमान सरकारसंग यस्तो छ जनताको अपेक्षा ! आइतबार, साउन १०, २०७८